Obere Business Accelerator | Bob Prosen
Bob Prosen Na-ebupụta Onye Ọchụso Obere Aka
Mọnde, Jenụwarị 24, 2011 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Afọ ole na ole gara aga, agụrụ m ma nwee obi ụtọ Kiss Theory Ndeewo, akwụkwọ sitere n'aka Bob Prosen nke na-enye ezigbo ndụmọdụ maka azụmaahịa. Usoro nchịkwa azụmaahịa Bob na mmemme ọzụzụ njikwa emeela ka arụmọrụ na uru baawanye ụba ma gbanwee ọdịbendị na Saber, Hitachi, Sprint, AT&T na ọtụtụ narị obere azụmaahịa gafee mba ahụ.
Ndụmọdụ Bob na ọzụzụ a na - achọ ugbu a - nke a bụ ngalaba na - adịbeghị anya site na MSNBC:
Onye ọ bụla na-ajụ mgbe niile ka ọ ga-esi nwekwuo arụmọrụ na uru na azụmaahịa ha. Ọ dị ka onye ọ bụla chọrọ ịmata usoro ziri ezi ọ ga - ewe iji bulie azụmaahịa gị, belata ngbanwe ndị ọrụ ma bulie uru gị n'agbanyeghị ọnọdụ akụ na ụba. Enweela m ọtụtụ ndụmọdụ Bob nyere kemgbe ịmalite azụmahịa m na azụmaahịa ahụ na-aga nke ọma.
Mụ na Bob nọ na-akparịta ụka ma ọ gbalịsiri ike ịkwalite usoro ọzụzụ a pụrụ iche (Ọ na-ebokarị $ 10,000 ụgwọ maka ụdị ihe a, mana ọ chọrọ nzaghachi maka mmemme ahụ.)
na nke a webinar n'efu Bob ga-akụziri gị:
Tọọ ebumnuche "ziri ezi" maka akụkụ atọ kachasị mkpa nke azụmahịa gị.
Usoro azụmahịa kachasị mkpa nke ga - enyere gị aka imezu ebumnuche gị.
Otu esi enyocha ịdị n’iru iduzi gị. Have nwere ihe ọ ga - ewe iji duzie nzukọ gị iji nweta uru pụrụ iche?
Ọzọ, dị nnọọ gaa na saịtị ahụ lee nkuzi vidiyo. Mgbe ị lechara ọzụzụ ahụ, ị ​​ga-ahụrịrịrịrịrịrịrịrịrịrịrịrịrịrị Bob ihe kacha mkpa ka ekwupute ya mgbe mmemme a ga - enweta Ọ gwụla, nwee olileanya ịnụ ụtọ ọzụzụ a!
PS: N'okpuru vidiyo ị nwere ike ibudata ụfọdụ ego pụrụ iche ma kwuo banyere ọzụzụ ahụ.
Tags: nchịkọta mkpọsa nyochaọchụchọ esereseAkwụkwọ Ahịamobile retail ngwa
Na-achọpụta Ọdịnaya Gị n'ationwa Niile
Jiri arụmọrụ na-anọghị n'ịntanetị mụbaa ọrụ email